Kiobà sy Etazonia: “Tonga Ny Andro Maharavo” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Janoary 2015 5:06 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, polski, 繁體中文, 简体中文, Dansk, Español
Ny 17 Desambra, fony ny filohan'i Kiobà sy Etazonia nanao fanambaràna niaraka momba ny fanombohan'ny fampanaraham-penitra ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta, Kiobàna marobe mpampiasa tambajotra no nizara ny tonony avy amin'ilay hira “The Happy Day That Is Coming” – Ilay Andro Maharavo ho Tonga. Tamin'ny 1974, taona folo mahery taorian'ny nahatapahan'ny fifandraisana diplaomatika teo amin'i Kiobà sy Etazonia, nosoratan'ilay Kiobàna mpanoratra tononkira no sady mpihira, Silvio Rodríguez, ny : “Miàla any ny andro midanika / arahan'ny androm-pahagagàna / vorona iray manatona tsy misy tahotra / mibarareokam-pifaliana noho ny fofo-manitrao / miha-manakaiky ny mamanàla.”
Ny fifindrà-monina no nanamarika ny tantara Kiobàna hatramin'ny revôlisiôna tamin'ny 1959. Ny Aprly 2011, tanora iray bilaogera, mpanao gazety, ary mpampianatra any amin'ny anjerimanontolon'i Havana no nizara tao amin'ny bilaoginy, El aguacero fa: “mandao an'i Kiobà ireo namana tsy foy.” Indray andro dia hoy ny namany mantsy azy, “maty izay olona miàla.”
Saingy ny 17 Desambra koa dia niteraka fihetsehampo firavoravoana sy fifanakaikezana, izay nitondra ny rehetra hitambatra niaraka tamin’ilay fehezanteny hoe, “Aorian'ny androany, tsy ho toy izao intsony ny zavatra rehetra.”
Efa elabe talohan'ny nampiharana ireo dingana voalohany tamin'ilay tondrozotra nofaritan'ny Trano Fotsy ho “famitranam-pihavanana sy fanomezana hery ny vahoaka Kiobàna,” no efa nitranga ny tena fiovàna fototra, araka ny lazain'i Carlos Manuel Álvarez, Kiobàna mpanao gazety “tao anatin'ny saintsika.” hoy i Álvarez :
Misy zavatra tsy dia mampilamin-tsaina loatra ihany koa miaraka amin'ity fanavaozana ity, izay amin'ny tranga sasany dia miseho amin'ny alàlan'ny kisary mahatsikaiky mampihomehy izay manafotra ireo tambajotra sôsialy, ary, amin'ny tranga hafa, amin'ny alàlan'ny fanontaniana mitodika amin'ny hoavy. “Inona no mitranga raha tsy maintsy hiatrika ‘fahavalo’ ianao mandritry ny androm-piainao manontolo, ary tampoka teo nitsahatra ny tsy ho ‘fahavalonao’ intsony ry zareo?” hoy i Sabdiel Batista.
Ao anatin'ny fiovàn'ny fiainana ao Kiobà, izay mitranga amin'izao fotoana izao, dia hoy i Rafael González manampy hoe :
Ao anatin'ity vondron'olom-pirenena ity, hanomboka tsy maintsy havitrika amin'ny hampandraisana anjara ireo Kiobàna monina any ivelany i Kiobà, izay ny vola alefan-dry zareo no mandrafitra ny loharanom-bola faharoa lehibe indrindra ho an'ny firenena. Avy any Alta Gracias ao Arzantina, Alberto Manuel Pacheco milaza ny filàna mampiakatra ny haavon'ny fandeferana ara-pôlitika sy ny fampandraisana anjara ny hafa. “Maniry hahita tanindrazana sambatra sy miroborobo isika, toerana antonona antsika na dia miaina any aminà firenana 200 aza,” hoy izy. Ampiany hoe :
Ny toetoetry ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny governemanta roa tonta no hametraka ny vatofototra mba “hahafahantsika miaina anay fandriampahalemna araka ny maha-mpiray vodirindrina antsika, ary ho amin'ny fifanajàn'ny andaniny sy ny ankilany sy ny fankasitrahana avy amin'ny vahoaka ho an'ny vahoaka, mba hampisy lanja ny fahasamihafàna izay tsy isalasalàna fa ananantsika tokoa (…) Tonga ny andro iray maharavo,” hoy i Silvio Rodríguez mamintina azy ao amin'ny bilaoginy.